DEG DEG: Macallinka Kooxda Manchester City ee Pep Guardiola hooyadiis oo u geeriyootay Coronavirus – Gool FM
Haaruun April 6, 2020
(Manchester) 06 Abril 2020. War hadda ay shaacisay kooxda Manchester City ayaa lagu xaqiijiyey geerida ku timid hooyada dhashay tababaraha naadigaas ee Pep Guardiola.
Kooxda ka dhisan England waxa ay xaqiijisay in Guardiola hooyadiis Dolors Sala Carrió ay u geeriyootay caabuqa coronavirus.
Qoraalka ay ku shaacisay Sky Blue geerida Pep Guardiola hooyadiis ayay ku sheegtay inay ku qurbaxday dalka Spain gaar ahaan magaalada Barcelona iyadoo 82-sano jir ahayd.
“Qoyska Manchester City aad ayay uga murugeysan yihiin inay soo sheegaan geerida maanta ku timid hooyada Pep ee Dolors Sala Carrió oo ku geeriyootay halka la yiraahdo Manresa ee dhacda Barcelona kaddib markii uu haleelay Coronavirus, waxayna da’deedu ahayd 82 jir.”
“Qof walba oo xiriir la leh naadiga wuxuu u dirayaa tacsi qalbi qaboojin ah waqtigaan aadka u dhib badan Pep, qoyskiisa iyo dhammaan saaxiibadooda.”
Warka naxdinta leh ayaa imanaya toddobaadyo kaddib markii uu Guardiola laftiisu deeq lacageed oo dhan 920,000 oo u dhigantya 1 milyan oo euro ku deeqay Spain si uu uga caawiyo bixinta agab caafimaad oo lagula dagaallamayo coronavirus.